Naannolee filannoorratti hanqina waraqaa muudateef guyyaan sagaleen itti laatamuu dheerate – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Naannolee filannoorratti hanqina waraqaa muudateef guyyaan sagaleen itti laatamuu dheerate
On Jun 10, 2021 1,214
Finfinnee, Waxabajjii 3, 2013 (FBC)- Naannolee filannoorratti hanqina waraqaa sagalee laachuurraatti muudate hordoofee guyyaan sagaleen itti laatamuu dheerachuu Boordii Filannoo Biyyoolessaa beeksiseera.
Boordichi guyyoota 11 filannoof hafaan ilaalchees ibsa laateera.
Walitti qabduun Boordii filannoo Biyyoolessaa aadde Burtukaan Miidhaksaa ibsa miidiyaleef laataniin, naannolee filannoo hanqinni itti muudatee fi rakkoo nageenyaa jirutti guyyaa sagaleen kan laatamuu Waxabajjii 14 tti sagaleen hin laatamuu jedhaniiru.
Kutaan odiitii boordichaa sakattoo gaggeesseen naannolee filannoo 54 irratti hanqinni mudateera.
Guyyaan filannoo 2ffaan Qaammee 1,2013 gaggeeffamaa jedhameera.
Misikkir Sinaaffiqtu gabaase
eesbuukii keenyan dabalata odeeffannoo waqtaawaa argachuuf; :-www.fanabc.com
Godina Jimmaatti filannoo marsaa 6ffaaf qophiin xumurame
Gaazeexeessitoonni idil addunyaa 89 filannoo marsaa 6ffaa gabaasuuf eeyyama argatan…
Godina Arsii Lixaatti filannoo marsaa 6ffaa milkeessuuf qophiin xumuramuu ibsame
Filannoo seenaa-qabeessa gaggeessuuf qophiin xumurame –…
Gaazeexeessitoonni idil addunyaa 89 filannoo marsaa 6ffaa…
Godina Arsii Lixaatti filannoo marsaa 6ffaa milkeessuuf…
Oduu biyya keessaa7349